Seddex Sababood oo Suurta gal ah oo Soonka Plasma Glucose Test & gt; 7 mmol / L-Diabetes Talks-Sinocare
Seddex Sababood oo Suurta gal ah in la Soomo Baaritaanka Glucose Plasma> 7 mmol / L
Waqtiga: 2020-04-16 Hits: 139
Maaddaama soonka sare ee gulukoosta dhiig-karka aan lagu daaweyn karin kaliya si fudud iyadoo la kordhinayo qiyaasta hypoglycemics. Kahor inta sababaha la helin, xalka waxaa laga yaabaa inuu gabi ahaanba ka duwanaado isla heerka sare ee sokorta guluukooska soonka.
Waa maxay soonka guluukoosta guluukoosta?
Gulukooska plasma gulukooska micnaheedu waa heerka gulukoosta dhiigga ee qiyaasta sooman kadib soomida 8 ~ 12 saacadood (ie cunnad kasta lama qaadan karo, laakiin biyaha waa la sakhraami karaa).
Guud ahaan, heerka sonkorta dhiigga waxaa loo tixgeliyaa inay aad u sarreeyaan marka gulukooska dhiigga ee plasma gulukoosta uu ka badan yahay 7 mmol / L.https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_sugar_level
Si loo ogaado hababka daaweynta, sababaha keena gulukoos dhiig badan oo plasma ah waa in marka hore la helaa.
1. Caddad xad dhaaf ah oo casho ah habeenkii hore.
Tani waa sababta ugu badan ee sooman soonka guluukooska soonka, kaas oo ku habboon qaddarka iyo tayada cashada iyo cunnada habeenkii.
Qaadashada xad dhaafka ah laakiin aan jimicsi sameyn karin cuntada ka dib, isticmaalka yar ayaa dhaca habeenkii, si loo kordhiyo xaddiga sonkorta ee cuntada lagu sii daayo dhiig. Dabcan, sokorta plasma ee gulukooska soonka ah waxaa sidoo kale sababi kara casho dambe.
Intaa waxaa sii dheer, gulukooska dhiigga ee plasma ee gulukooska sare ayaa sidoo kale ku habboon gobolka intiisa kale iyo gobolka hurdada habeenkii. Haddii hurdo xumo iyo xaalad hurdo la'aan ay muuqato habeenkii ama haddii niyad xumo iyo daal fara badani ay muuqdaan habeenkii, gulukooska dhiigga ee soonka ayaa isbeddelaya subaxdii, oo mararka qaarkoodna sare ama hooseeya.
Haddii gulukooska dhiigga ee plasma ee aadka u sarreeya uu dhacaa mararka qaarkood dhowr jeer, dhib badan ma ahan, hyperglycemia-ka waxaa lagu hagaajin karaa iyada oo la adeegsanayo xakameynta iyo socodka cuntada kadib cuntada. Haddii soonka gulukooska dhiigga ee sareeya ee gulukoosku badanaa dhacayo, labada arrimood ee soo socda waa in la tixgeliyaa.
2. Cudurka macaanka / sonkorowga mellitus ifafaaleedka wajiga: heerka heerka gulukooska ee dhiigga ma hooseeyo habeenkii laakiin wuxuu kacaa aroorta
Gulukoosta dhiigga kaliya laguma hagaajin karo tamarta laga soo daayo cuntada, laakiin sidoo kale waxaa habeeya hormoonno kala duwan, kuwaas oo intooda badan kordhin kara heerka gulukooska dhiigga (oo ay ku jiraan glucocorticoid iyo hormoonka koritaanka iyo ect.)
Waaberiga, hormoonnadaani waxay bilaabaan inay si tartiib tartiib ah kor ugu kacaan, kuwaas oo ku shaqeeya glycogen-ka keydka beerka / muruqyada waxaana loo sii daayaa wareegga dhiigga; ka dibna heerka gulukooska ee dhiigga ayaa kor ugu kacaya si ku habboon.
Sayniska caafimaadka, kor u kaca heerka gulukooska dhiigga ee waagii hore ayaa loo yaqaanaa sonkorow mellitus ifafaale aroor hore. Sababo la xiriira saameynta hormoonnada hyperglycemic, heerka gulukooska dhiigga ayaa si tartiib tartiib ah kor ugu kaca. Sidaa darteed, gulukooska plasma gulukoosta ayaa laga yaabaa inuu ka sarreeyo gulukoosta dhiigga ee durdurkii hore.
Sidee loo kormeeraa? Marka gulukoosta dhiiggu ay xasilloon tahay isla markaana hypoglycemia uusan dhicin habeenkii laakiin gulukoosta dhiiggu si tartiib tartiib ah ayey subaxdii u kacdaa gulukooska dhiigga ee soomidda ka hor quraacda, waxaa loo tixgeliyaa ifafaale sonkorow oo mellitus aroortii hore ah.
Sidee loo daaweeyaa? Iyada oo ku saleysan ku adkaysashada daaweynta cuntada caadiga ah, waqtiyada cuntada ayaa si sax ah loo kordhin karaa (tusaale ahaan 4 ~ 5 cunno maalintii).
Dhanka kale, hal cunoqabateyn waa in lagu kordhiyaa qiyaastii hal saac kahor hurdada habeenkii; qadar yar oo cunto ah oo ay ku jirto karbohaydrayt iyo borotiin ayaa la qaadan karaa, sida hal galaas oo caano ah, hal madal oo congee ah ama dhowr xabbo oo rooti ah. Hababka noocan ah, xaddiga sirta iyo dareenka insulinta ee habeenkii ayaa si ka sii wanaagsan lagu wanaajin karaa.
Ama, dhakhtar ayaa si toos ah loogu arkaa inuu hagaajiyo dib-u-habaynta daaweynta oo loo kordhiyo qiyaasta hypoglycemics.
3. Saamaynta Somogyi: Heerka gulukoosta dhiigga ayaa aad u hooseeya habeenkii, laakiin waxay kacdaa subaxnimada
Marka hypoglycemia ay u nugul tahay inay ku dhacdo bukaannada sokorowga, habka difaaca ayaa lagu bilaabaa jidhkooda, iyo dheecaanka hormoonnada hyperglycemic-ka ee horay loo soo sheegay waa la kordhayaa, si loo kordhiyo heerka gulukooska dhiigga oo ay u keento hyperglycemia sare. Ifafaalehan waxaa loo yaqaanaa saameynta Somogyi.
Si aad ugu qalanto feejignaanta, bukaanka sokorowga qaba cudurka Somogyi, astaamaha caadiga ah ee hypoglycemia mararka qaar ma dhacaan sida 'palpitation iyo dhidida qabow'; Dhanka kale, maadaama ay hurdaan, dhacda koronto yaraanta 'hypoglycemic coma' ayaa noqota mid aad u khatar badan.
Hypoglycemia saqda dhexe ee saqda dhexe ayaa saadaalineysa bilawga shucuurta.
Sidee loo kormeeraa? Si loo yareeyo saameynta hurdada, gulukoosta dhiiga waxaa lagula soconayaa 2: 00 ~ 3: 00 am Markii shuruudaha la oggol yahay, kormeerka 24h ee gulukooska dhiigga ayaa si ka wanaagsan loogu sameyn lahaa isbitaalada.
Haddii hypoglycemia lagu tilmaamo cabir 0: 00 ~ 4: 00 (ie ≤3.9 mmol / L), kacitaanka gulukooska dhiigga ee soonka ka hor quraacda waxaa keenaya saameynta Somogyi.
Waa aasaaska lagu xallinayo saameynta Somogyi si loo qaato cunto / jimicsi caadi ah oo loo qaato hypoglycemics-ka si habboon.
Bukaanka sokorowga ah ee qaata dawooyinka loo yaqaan 'sulfonylureas' ee mudada dheer shaqeynayey (sida Kiniiniyada Gliclazide Sustain-release Kiniiniyada iyo Kiniiniyada Glimepiride), insulin-ta insulinta leh iyo insulinta dhexdhexaadka u shaqeysa ama muddo dheer shaqeyneysa, fiiro gaar ah waa in la siiyaa saamaynta Somogyi.
Kala soocidda cunnooyinka waa tallaabo wanaagsan oo looga hortagayo saameynta Somogyi.
Waxaa xusid mudan, haddii cuntada la habeeyo habeenkii, waa in la kormeero gulukooska dhiigga labadaba cashada ka dib iyo hurdada ka hor.
Xilligan la joogo, 4 xabbo oo buskud oo soodheer ah ama hal galaas oo caano ah (225 ml) ayaa si habboon loogu darayaa; welwel aad u weyn waa in aan la siin in haddii hyperglycemia ay dhacdo ka dib cuntada ka hor hurdada; waa inaad ogaataa in waxyeelo weyn ay soosaarto kadib markay dhacdo dhiig yaraanta 'hypoglycemia'.
Waxaa xusid mudan, hababkani waa uun daaweyn ku meelgaar ah oo macnaheedu yahay sonkorowga mellitus aroorta ifafaale ama saameynta Somogyi.
Xaaladaha badankood, haddii hypoglycemics-ka loo baahan yahay in la hagaajiyo, dhakhtar ayaa si ka wanaagsan loogu arki lahaa waqtiga daaweynta. Nidaamka daaweynta ugu habboon ayaa ay dooran doonaan dhakhaatiirta iyadoo loo eegayo xaaladaha jirada dhabta ah ee jirada.
Sidaa daraadeed, gulukoosta dhiig ee plasma gulukooska guud ahaan waxaa sababa afar sababood:
1. Cunno xad dhaaf ah habeenkii xalay. Xalal: Cun cun yar; ama si sax ah u yareeyaan qadashada qaadashada cuntooyinka hodanka ku ah iyo borotiinka.
2. Hurdo xumo xalay. Xalal: Gogos horay u gal si aad u gasho habka hurdada; hana ku dhex muslinina taleefanka gacanta kahor hurdada.
3. Sonkorow mellitus ifafaale ifafaale. Xalal: Cun cunno badan maalin kasta laakiin cunto ka yar cunn kasta; ama kordhiyo xaddiga hypoglycemics ee la siiyo hurdada ka hor iyadoo la raacayo hagitaanka dhakhaatiirta.
Bogga Dambe: Aqoonta Looga Baahan Yahay Caruurta Bukaanka qaba Sonkorowga